अब आवेदन दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
असार ०६, २०७५ 1044 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रालय) पास गरे पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता अब हटने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग देशैभरि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको छ ।
थप ४ वटा छपाई प्रिन्टर मेसिन ल्याएसँगै चालक अनुमतिपत्र लिन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटने विभागले जानकारी दिएको छ । स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्न पर्याप्त मेसिन नहुँदा ढिलाई हुने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो ।
४ वटा आधुनिक प्राविधिसहितको प्रिन्टरले दैनिक ५ हजार स्मार्ट कार्ड छपाई हुने विभागको दाबी छ । हाल दैनिक ४ हजारदेखि ४५ सयसम्म स्मार्ट लाइसेन्सको माग छ । ९ वटा मेसिनबाट दैनिक ५ हजार स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्न सकिने विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालेले बताए ।
‘अबको २ महिनापछि सेवाग्राहीले ट्रायल पास गरेको एक महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘छाप्न बाँकी करिब २ लाखभन्दा बढी अनुपतिपत्रको काम २ महिनाभित्र सकिनेछ ।’
अहिले विभागले बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स छाप्दै आएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो छरितो ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा विभाग क्रियाशील रहेको अर्यालले बताए ।
सरकारले २०७२ मंसिर २० गतेदेखि स्मार्ट कार्डको रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सुरु गरेको हो । तर, पर्याप्त छपाई मेसिनको कमीले समयमै लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको थिएन । अर्यालका अनुसार पछिल्लो पटक साढे ७ लाख थान स्मार्ट लनाइसेन्स कार्ड ल्याइएको छ विभागले अब १० लाख कार्ड खरिद गर्न ठेक्काको तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म करिब ४ लाखभन्दा बढीले स्मार्ट लाइसेन्स लिएका छन् ।